Ireto Dropkas ireto ve no ho farany hiompy “yaks” ao Sikkim ? · Global Voices teny Malagasy
Ireto Dropkas ireto ve no ho farany hiompy “yaks” ao Sikkim ?
Voadika ny 27 Aogositra 2018 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, русский, Français, Italiano, Deutsch, Nederlands, 日本語, English
Mpiandry yaks ao Tibet. SARY : Matt Ming (CC BY 2.0)
(Ny ‘Yak’ dia tsy hafa fa karazana omby)
Any amin'ireo havoana ao avaratr'i Sikkim, avy avaratra-atsinanan'i India, milamina saingy henjana ny fiainan'ireo vahoaka “drokpa”. Manakoako eny an-dohasaha ny hira kaloin'ireo Drokpas rehefa amperinasa. Tsy mba mponina am-bohitra tsotra nipetraka aminà toerana iray nandritra ny ampolo taona maro ka hoe nanana fotopivelomana raikitra ireo. Ny mifanohitra amin'izany, ireo Drokpas, araka ny anarany, dia mpifindrafindra toerana — ny hoe “drokpa” dia teny tibetàna azo adika tsotsotra hoe “mpifindrafindra toerana” na mpiandry omby any an-tendrombohitra”. Kanefa hatramin'ireo andian-taranaka maro nifandimby, niditra taminà asa iray izay atsy ho atsy dia ho foana ao Sikkin ireo Drokpas: ny fiompiana yaks.
Fanamby maro no atrehan'ireo mpiompy yaks ao Sikkim, toy ny fiovàn'ny toetrandro, ny teritery eny amin'ny sisintany, ny fahavitsian'ny ho enti-manana, ny tontolo ara-toekarena tsy azo antoka ary ny fisarihan'ny fiainana iray mora kokoa sy ahazoana aina kokoa any an-tanandehibe. Nitambatra nandritra ny taona maro ireny fahasahiranana ireny, nanomboka tamin'ny taona 1960, fony nakatona ny sisintany tao Tibet. Ny fanohizana ny fiainana maha-mpiompy dia midika fa tsy maintsy mandeha miakatra avo kokoa hatrany, vokany, hihena ny isan'ireo olona vonona hitazona izay fomba fiaina izay.
Talohan'ny 1962, ireo Drokpas, avy any Tibet, dia nifindra monina avy any Tibet nankany amin'ireo faritra avaratr'i Sikkim mba hampiraoka ahitra ny yaks ompiany. Mandritra ireo volana maro rehefa ririnina, mipetraka vonjimaika ao Tibet ry zareo, any akaikin'i Khampa Dzong, izay lava kokoa ny bozaka firaofana, mitondra tsironkanina betsaka kokoa ary tsy tototry ny orampanàla. Rehefa lohataona, mikisaka mianatsimo ry zareo mankany amin'ireo faritry ny havoana ao avaratr'i Sikkim, mba hipetraka mandritry ny fotoana fohy any amin'ireo faritra tahàka an'i Dongkung, Lungma, Kerang sy Lachen ao Sikkim. Any amin'ireo faritra ireo, manao raharaham-barotra miaraka amin'ireo Drokpas ireo Lachenpas ao amin'ny lemak'i Lachen, tsy ho an'ny tombony ara-bola ihany fa koa ny kolontsaina.Io fifampiraharahana ara-barotra io no mikolokolo ny fifaneraserana ara-kolontsina ary mandrisika ny fandriampahalemana eo amin'ireo vondrona roa ireo. Ho takalony, nanara-maso ny andiam-biby fiompin'reio Lachenpas ry zareo Drokpas ary mivarotra ny ambimbavany rehefa avy manome ronononà yaks, zavatra vita avy amin'ny ronono sy lamba volonondry azo tamin'ireo biby fiompy ho an'ny vondrom-piarahamonina misy azy. Fifanakalozana nohamorain'ny fifanarahana manankery eo amin'i Tibet sy India, ary ny sisintany misokatra malalaka ho an'ny fivezivezen'ireo Drokpas.
Fony nobodoin'i Shina ny tao Tibet, nakatony ny sisintany, ary tamin'ny 1962 ireo Drokpas no voatery nifindra nipetraka tamin'ny andaniny sy ankilany. Nanomboka teo, tsy maintsy noferan-dry zareo Drokpas ho aminà faritra iray ny fifindramoniny, na ririnina na lohataona. Araka ny voalazan'ny Dr Anna Balikci Denjongpa, mpandrindra ny fikarohana ao amin'ny Ivontoerana Namgyal momba ny Fahaizana an'i Tibet ao Sikkim, amafisin'ireo Drokpas fa talohan'ny nikatonan'ny sisintany, marobe io yaks nandeha nifindra toerana firaofana ahitra. Ankehitriny, zara raha misy 12 sisa ireo fianakaviana mampihatra ilay fomba fiaina nentindrazan'ireo Drokpas mpiompy yaks. Nahita asa hafa daholo ireo mpikambana hafa avy ao amin'ilay vondrom-piarahamonina, ary ny ankamaroany dia lasa nipetraka any amin'ireo fari-piadidiana ambanivohitra sy any an-tanandehibe.
Drokpa milanja hoditra ondry, ao an-tanànan'i Lachen. SARY: Karchoong Diyali. Nahazoana alàlana.
Na inona hidona na inona hihatra
Tsy mora ny fomba fiainana nentindrazan'ireo Dropkas. Ny fivezivezena voafetra manjo azy ireo ao amin'ny fanjakan'i Sikkim, ririnina henjana be no iaretan-dry zareo, satria indraindray ireo faritra an-tendrombohitra ao avaratr'i Sikkim no mizaka firotsahana ranomandry matevina, mampanano-sarotra ny hahitàna lemaka rakotra ahitra hampiraofana ireo yaks.
“Rehefa mirotsaka ny ranomandry, dia sady fahasarotana ho an'ny biby, no fahasarotana ho anay koa”, hoy ny fanazavan'i Aie Chezum tao anaty sarimihetsika notontosain'ny Ivontoerana Namgyal momba ny Fahaizana an'i Tibet, nomena ny lohateny hoe “Drokpa—Fampiraofana ao amin'ny sisintany—Ireo mpiompy yaks ao Avaratr'i Sikkim”.
Ny hena nahahy no tsy maintsy iveloman'ireo Drokpas mandritra ny ririnina. Fa miteraka olana ihany koa ny tsy fitsaharan'ny fiakaran'ny hafanana. Araka ny tarehimarika nomen'ny mpamantatra toetrandro, isantaona dia miakatra eo amin'ny 2,5° C eo ho eo ny hafanàna ao Sikkim. Mihamanify vokatr'izany ny bozaka, ary ho an'ireo yaks dia miteraka tsy fahazoana aina ny fipetrahana aminà toerana avo sy ny hafanàna. Lasa vesatra ireo biby tsy ampy sakafo, satria voatery mivarotra azy ireny na mamahana azy aminà sakafo karakaraina manokana ry zareo Drokpas noho ireo bozaka rakotry ny ranomandry rehefa ririnina. Midika izany fa mila fandaniana fanampiny ho an'ny fividianana sakafom-biby. Ho an'io vondrona miaina malalaka hatrizay io, fotokevitra ara-toekarena somary vaovao mihitsy izany, indrindra fa niankina hatrany tamn'ny varotra ny vokatr'izy ireo sy izay fitaovana tsy maintsy ilaina.
Hatramin'ny nanakatonana ny sisintany, lasa miankina amin'ny tafika ihany koa ilay vondrona raha vao resaka fitsaboana aretina henjana any amin'ireny faritra saro-dàlana ireny, na dia tsy afaka manao na inona na inona ho azy ireo aza ny tafika manoloana ireny aretina henjana ireny. Rehefa izany no mitranga, lasa mangozohozo na dia ny fiezahana ho velona fotsiny aza.
Mba hahatakarana ireo Drokpas, mila mahatsiaro fa ny yaks dia ivon'ny toekarena tsy mainkindoha iainan'ilay vondrompiarahamonina, amin'ny alàlan'ny famatsiana volombiby sy ronono izay amoronan-dry zareo ny vokatra isankarazany, hatramin'ny tainomby, izay amainina sy atao angovo fandrehitra. Avy amin'ny volombiby no amoronan-dry zareo bàn-kiraro, akanjo ary karipetra. Tany aloha tany, nandrary akanjo lafo vidy ihany koa ry zareo, nantsoina hoe sheema sy puruk izay nitafiana indrindra indrindra tao Tibet, ary vokatra nifotoran'ny fifanakalozana ara-barotra. Noho ireo fameperana nisy tamin'ny sisintany, tavela teo ny raharaham-barotra. nampiasaina betsaka ho amin'ny dite — antsoina hoe tchai ao amin'ny faritra — ny ronono avy amin'ny yaks rehefa ririnina, ary avadika ho fromazy rehefa lohataona, ankoatra ny zavatra hafa. Raha tsara antoka ny vokatra azon'izy ireo avy amin'ny ronono, amidy any an-tanandehibe ireo ambimbava amin'ny fromazy, saingy raha ny lazain'ny mpivarotra iray ao Gangtok, lasa vokatra iray saro-tadiavina izany.
Na teo aza ny taona nifandimby, noraisina hatrany ho toy ny vahiny ireo Drokpas fa tsy toy ny mponina ao amin'ny faritra. Voafandrika amin'ilay fameperana ny sisintany ry zareo ary tsy maintsy mitandrina amin'izay hametrahany ny tongony, tsy hoe fotsiny mety hanitsaka faritra misy vanja nalevina ny bibin-dry zareo, fa koa satria tsy maintsy manaraka ireo fitsipika sy fepetra napetrak'ireo vondrom-piarahamonina ivahinianany.
Tsy azo antoka ny hoavin'ny asa fiandrasana yaks
Kanefa, raha tarafina avy amin'izany rehetra izany, vitan'ireo Drokpas sasany ihany ny miaina araka ny tokony ho izy. Vitany ny mameno ny banga isambolana amin'ny alàlan'ny fiandrasana ny bibin'ireo olona ao am-bohitr'i Sikkim eny amin'ny lemak'i Lachen sy amin'ny fanaovana asa isankarazany toy ny raharaha miaramila. Ankoatra ny sakafom-biby, ny fitafiana, ny sakafony ary ireo filàna hafa, misy fandaniana fanampiny zakain'ny ankamaroan'ireo Drokpas ankehitriny, ny sandan'ny fampianarana ny taranany. Maro ireo nisafidy ny handefa ny zanany hamonjy sekoly any an-tanandehibe, izay rehefa nahazo fiofanana sy nahita tsirony tamin'ny fiainana an-drenivohitra, dia mandà tsy hiverina intsony sy hanaiky ny karazana fiainana manahirana mifamatotra amin'ny fiompiana yaks. “Rehefa tsy nahomby ny zavatra hafa rehetra, izay ry zareo vao misafidy ny hiverina ho Drokpa”, hoy Dr Anna Balikci Denzongpa manazava. Matoa koa ireo tovolahy Drokpa mandositra ny asa maha-mpiompy yaks, dia noho ny fahasahiranan-dry zalahy mahita vehivavy ho vadiana vonona hanaiky io asa io.
Miafara any amin'ny raharaha miaramila, na asam-panjakana, na asa hafa any an-tanandehibe ireo izay mandà tsy hanao ny asan'ny mpiompy yaks. Ny firoboroboana tato ho ato tamin'ny sehatry ny fizahantany ao Sikkim dia mamorona ihany koa asa ao anatin'io sehatra io. Safidy farany ho an'ireo izay tsy nahavita nahita asa ny mipetraka any amin'ireo toby natao handraisana ireo tibetàna mpitsoaponenana. Tsy fandrisihana ampy mba hanohizan'ireo tanora ny fomba fiaina nentindrazana drokpa ny fanampiana omen'ny fanjakàna, na ny fahalinana asehon'ireo ONG vitsivitsy.
Na eo aza izany rehetra izany, mbola manohy io asa nentindrazana io ny sasany ary miaina ny fiainan'ny mpiompy yaks any amin'ireo tendrombohitra kisilasila sy saro-dàlana ao Sikkim.Saingy na ireo sahy misedra ny fepetra sarotra mba hanaovana izany asa izany aza dia mahatsapa fa mety hisafidy ny hivarotra ny andiam-bibiny ireo taranany ary handeha honina any an-tanandehibe hanao asa hafa. Ity andian-taranaka miavaka manokana ity no mety ho ilay hanoratra ny toko farany amin'ny tantaran'ireo Drokpas mpiompy yaks ao Sikkim.